Ny takariva voalohany fampakaram-bady: torohevitra
Psychology and Relationships Firaisana ara-nofo
Androany, tsy misy olona manana fanontaniana mikasika ny fomba fampakarana ny fampakaram-bady voalohany, fa ny torohevitra momba ny fomba hanomanana azy sy hitazomana mpivady maro dia ilaina. Inona no tokony hatao amin'ny alina fampakaram-bady - hijery ny kintana sy hialana amin'ny hafanam-po eo ambanin'ny lanitra na afenina amin'ny tontolo ao amin'ny efitrano fianarana mariazy, dia manapa-kevitra ianao. Ary mba hamaritana izany dia mora kokoa, eto misy torohevitra sy hevitra sasany ho an'ny fikarakarana ny fampakaram-bady voalohany alina.
Torohevitra roa momba ny fomba handaniana ny fampakaram-bady
Amin'ny fomba nentim-paharazana, ny efitrano ho an'ny fampakaram-bady voalohany amin'ny alina dia voaravaka hamorona toetr'andro romantika. Matetika dia andraikitr'ireo ray aman-drenin'ireo mpivady vao na vavolombelona io, fa raha miahiahy ianao fa ny fanandramanao dia ho tsapa, dia tsara kokoa ny mifehy ity dingana ity. Mitandrema amin'ny fandriana fandriana, kodiarana tsara kokoa, sehatra na rongony misy seza. Ary aoka izy ireo ho monophonic - fa ny fifantohana amin'ny sary dia tsy variana. Mianara mozika ho an'ity alina ity, ilay iray izay tianao. Maro ihany koa ny olona manoro hevitra ny fisafidianana ny melodies tsy misy teny, toa matahotra fa amin'ny fotoan-dehibe indrindra dia hihira ny mpivady.
Maro ireo brides no mihevitra fa ny alakamisy voalohany amin'ny fampakaram-bady dia mandalo toy ny riandrano mandalo ny fitiavana sy ny fitiavana. Saingy mahavita manome fotoana ho an'ny zavatra tsy voatanisa foana aho - reraka ny mpivady ary ny sokatra amin'ny fety dia mivoaka. Mba hisakanana izany, dia tsy dia mifantoka loatra ny saina sy ny fifantohana. Aza manaraka ny fitsipika rehetra momba ny fahaiza-mandray vahiny ary mipetraha mandra-pahatongan'ny vahiny farany, rehefa te hiverina ianao, dia mila manao izany ianao, maniry ny hanatrehana ny vahiny ny hariva. Eny, mba hanamafisana ny fitiavana, mitandrema ny latabatra ao amin'ny efitrano fandriana. Avelao hisy ny aphrodisiacs - sôkôlà, trondro, seafood.
Ahoana no fomba hahatonga ny fampakaram-bady tsy hay hadinoina? Mazava ho azy fa hanomana tsara azy izy. Ny ampakarina ao amin'ny akanjo fampakaram-bady dia mijery tsara tarehy, fa ataovy azo antoka fa teo ambanin'ny akanjo dia zavatra hijery. Ankizivavy tsara tarehy sy akanjom-boninahitra lavorary ao amin'ny efitrano fandriana dia tonga lafatra amin'ity tanjona ity. Ny volom-bolo vaovao tsy dia ambony loatra koa.
Mazava ho azy, tsy misy olona maniry haingana ny fampakarambadin'ny alina, noho izany dia eritrereto ny sora-tanany na ny fanatsarana azy. Manolora lalao milalao aingam-panahy, mandihy loko iray ho an'ny olon-tiana, miaraka amin'ny fomba fijery ny Kama Sutra.
Ny alina fampakaram-bady voalohany sy ny lahy voalohany
Eny, ary amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, dia misy zazavavy iray very tsy virjiny afa-tsy mandritra ny fampakaram-bady. Amin'ity tranga ity dia matetika ianao no maheno ny vadin'ny ho avy hoe "Matahotra ny fampakaram-bady ny alina aho" ary tsy izany satria tsy fantatry ny zazavavy ny fomba hitrangan'izany rehetra izany. Mifanohitra amin'izany kosa fa matetika ny namana efa za-draharaha sy efa za-draharaha no miresaka momba ny zavatra andrasana, fa tsy mety izany, mampatahotra ny ampakarina amin'ny alahelo sy ra mandritra ny taovam-pananahana. Vokatr'izany dia niondrika ilay zazavavy ary tena mahatsapa ny alahelony izay matahotra azy. Mba hisorohana izany dia mila manipika ireo "tantara mampihoron-koditra" ao amin'ny lohanao ianao. Mangataha ny vadinao ho avy hanampy anao hiala sasatra, aoka izy ho tia sy ho tia. Raha toa ny fiparitahan'ny hymen dia mihatra amin'ny fotoana fanentanana mahery vaika, dia ho kely ny fanaintainana. Ankoatr'izay, ny fanaintainana dia tsy voatery ho ny mpiara-dia amin'ny firaisana voalohany - ny elamika sasany dia elastika ary tsara tarehy na matevina ary rovitra hanala. Noho izany, aza manelingelina ny mieritreritra ny tokony hataon'ilay tovovavy mandritra ny fampakaram-bady alina, mifalia tsara kokoa ary avelao ilay mpiara-miasa handray andraikitra amin'izao fotoana izao.
Ny fihazonana tsara indrindra ho an'ny virjina dia izao manaraka izao. Ny tovovavy dia tokony handry eo amin'ny lamosiny, hametraka miloko na ondana kely eo ambany elany, ary ny tongony mandohalika eo amin'ny lohalika ary manangana azy any amin'ny tratrany. Ao anatin'io toerana io, dia mihetsiketsika ny miloko, ary mihatra haingana ny fiparitahany, ka miteraka fanaintainana kely. Aorian'ny fiterahana ny fofona, manomboka ny ra, izay matetika dia mandalo haingana, nefa mamerimberina indray ny fitiavana fampiharana rehefa afaka 4-5 andro, rehefa hanasitrana ny zava-drehetra.
Fanamboarana - Fanazaran-tena
Inona ny firaisana amin'ny vava - inona no ilaina sy mampidi-doza?
Ny tsiambaratelo momba ny vehivavy
Ahoana ny fanaovana firaisana amin'ny virosy virtoaly?
Ahoana ny fomba ahafahanao lehilahy iray mahafinaritra - lehilahy erogenous zones sy erotic fantasy
Sandra Bullock sy Keanu Reeves
Ahoana no ahafantarana raha tia anao ny lehilahy manambady?
Hevitra ho an'ny sary fitifirana vehivavy bevohoka
Ny andriamanitra masoandro
Toe-jomà miloko mody - ririnina 2015
Misy vina eny an-tanana - antony
Ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny renim-pianakaviana
Bolo mitafotafo 2013
Manimba ny nifiny ny zaza
Amin'ny inona ny manao kiraro mavomavo?
Spy mania: fanaraha-maso ny havan-tianao